Dhaxal Sugaha Dalka Sucudiga Maxamed Bin Salmaan Oo Qarka u Saaran in Xilka Laga Qaado | Raadgoob
Dhaxal Sugaha Dalka Sucudiga Maxamed Bin Salmaan Oo Qarka u Saaran in Xilka Laga Qaado
Waxaana uu dhaxalsugaha oo doonaya inuu meel iska saaro arrintan dilka Khashoggi ayaa dambi oogayaasha Sacudi Carabiya waxa ay manta sheegeen in dilka saxafiga uu ahaa mid la sii qorsheeyay dadkii ka dambeeyayna su’aalo la weydiinayo.
Colonel Lees oo hore u qoray bug ka hadlayay qoyska boqortooyada Al Sacuud ayaa aaminsan in aan la awoodin in hadda la yiraahdo dhaxalsugaha waa dambiile balse Boqorka uu haysto sabab uu ugaga qaado xilka dhaxalsugaha qaladaadka badan galay mudadii koobneyd ee awoodda lagu aaminay.
Waa Kuma Dhaxalsugaha Amiir Maxamed Bin Salman
Hooyadiis waa xaaska saddexaad ee boqor Salmaan, waxaana lagu magacaabaa Fahdah bint Falah bin Sultan. Ka dib markii uu shahaadada 1aad ee waxbarashada jaamacadeed ka qaatay Jaamacadda King Saud ee ku taalla magaalo madaxda Sucuudiga ee Riyaad, wuxuu ka soo shaqeeyay hay’ado kala duwan oo ay leedahay boqortooyada.
Bishii Janaayo ee sannadkii 2015-kii ayuu geeriyooday boqor Cabdalla bin Cabdul Casiis, Salmaan ayaana xilka boqortooyada la wareegay isagoo markaas ay da’diisu ahayd 79 sano.
wakhti xaadirka la joogo sucuudigu waxa uu waja hayaa arin cakiran oo dunida oo dhani ay eegayso